पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली | Investopaper
पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली
इन्भेष्टाेपेपर । पुष ११, २०७७
प्रस्तुत छ भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका विषयमा प्राधिकरण स्थापनापछि लामो समय प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ।
पुरातात्विक सम्पदा पुरानैस्वरुपमा गुणस्तर उही हुनेगरी बनाउनुपर्छ । खरीद कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट रु १० करोडसम्म खर्च गरेर सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रु एक करोडसम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले यथेष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ ।
जापान, भारतलगायत देशका सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत काम शुरु गरिएको छ । नेपाल सरकारमात्र होइन दातृ निकायको काम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत भएको छ ।
पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने ९२० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको काम सकिएको छ । पछिल्लो समय द्रुत गतिमा सम्पदा पुनःनिर्माण भएको छ । सम्पदाको ऐतिहासिकता बचाउनुपर्ने भएकाले पनि शुरुमा ढिला भएको हो । धेरै सम्पदा चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।
रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वरलाई प्रताप मल्लकालीनस्वरुपमा पुनःनिर्माण गरिएको छ । काष्ठमण्डप पनि पुरानैस्वरुपमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । प्रताप मल्लको पालाको जस्तो इँटा बनाउन लगाएर बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा जग्गाको समस्या देखिएको छ रु यसलाई प्राधिकरणले कसरी समाधान गर्छ ?
← संवैधानिक इजलास गठनप्रति बारको असन्तोष
नेकपा विभाजनकाे असर : कुन प्रदेशमा के हुँदैछ ? →